UGoogle utshintsha ingqondo yakhe kwaye uzakwazisa usetyenziso lwedesktop kuGoogle Allo | Iindaba zeGajethi
UGoogle utshintsha ingqondo yakhe kwaye uzokwazisa usetyenziso lwe desktop kwiGoogle Allo
KwiActualidad Gadget siye sathetha izihlandlo ezininzi malunga nesicelo somyalezo esitsha apho uGoogle wayefuna ukufikelela ngokupheleleyo kwihlabathi lokuthumela imiyalezo, isicelo esibizwa ngokuba yiGoogle Allo. Allo? Ewe, Isicelo esifike kwintengiso kwiinyanga ezininzi ezidlulileyo kwaye okwangoku ayisetyenziswa phantse nangubani na Yiyo loo nto uninzi lwenu mhlawumbi lingakhumbuli. Ngexesha lokunikezelwa kwayo kwiGoogle I / O yokugqibela, uGoogle wathi esi sicelo siza kufumaneka kuphela kwizixhobo eziselfowuni. Impazamo yokuqala. Nangona ii-PC kunye neeMac zithengiswa kancinci nangaphantsi, ayinguye wonke umntu ozimiseleyo ukusebenzisa ifowuni ngalo lonke ixesha ikhala ukuze babe nencoko, ngakumbi ukuba benza nawuphi na omnye umsebenzi ophambi kwekhompyuter.
I-Telegram yenye yezicelo zokuqala zokuthumela imiyalezo kwi-multiplatform, eyenze enye yeefowuni eziza kwamkelwa ngabasebenzisi. I-WhatsApp ikwanayo nenkonzo efanayo, nangona ngenkonzo yewebhu esisinyanzela ukuba sihlale sinayo ifowuni. Ukuzama ukoyisa le ngxaki ibalulekileyo, abafana bakwaGoogle batshintshe ingqondo kwaye ukuzama ukonyusa iqonga labo lokuthumela imiyalezo baya kuphehlelela uhlobo lwe desktop.
Ngelo xesha Asazi ukuba iya kuba sisicelo esizimeleyo-setayile yeTelegram okanye ukuba iyakusebenzisa i-WhatsApp-style web service. Asazi nokuba iya kufumaneka kuwo onke amaqonga (iiWindows, iiMacOS, ithebhulethi, iLinux). Into ecace gca yeyokuba owona mqobo uphambili esiwunikwa sesi sicelo kukweli nqanaba kwaye uGoogle, nokuba ingakanani iGoogle, akanakho ukuzitshintsha ngokwawo xa sele siqhelile. Ukuqaliswa kwesicelo okanye inkonzo yewebhu kunokuba yinto ebalulekileyo ukuze iqonga lomyalezo kaGoogle Allo liqale ukuba lukhetho phakathi kwabasebenzisi.
Ukuphehlelelwa kweGoogle Allo, ebingazukutshintsha ii-Hangouts, ibisisenzo esisisidenge, ngokoluvo lwam, kuba yakuba ifumene abasebenzisi ukuba baqhele ii-Hangouts, ubanyanzelile ukuba batshintshe i-app entsha engenaqonga kwaye loo nto ayibonisi imisebenzi efanayo neyangaphambili. Ingathi uGoogle ufuna ukuqala ekuqaleni, ethembele kubo bonke abasebenzisi beHangouts abaza kutshintshela kuGoogle Allo ngaphandle kwengcinga yesibini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » UGoogle utshintsha ingqondo yakhe kwaye uzokwazisa usetyenziso lwe desktop kwiGoogle Allo
I-Nintendo switchch ayizukuhambelana neebluetooth zebhloko